I-Bitcoin Drives Market Up Njengoba i-DEXes Deflate
Ucwaningo: Iningi labatshalizimali baseYurophu abanobuchwepheshe bathenga izimpahla zedijithali noma bahlela ukwenza
I-China iqhekeka Phansi: Ngabe iTether izovumelana kanjani nokuQiniswa okuQinisekile?
Ukunconywa kukaBitcoin kuqhubekile nokulinganisa ukusebenza kwephrojekthi ezinyangeni ezisanda kwedlula, ngenkathi ukwehla kukaDeFi kubulawa ukuhwebelana okwenziwe ngabathile.
11 amaminithi adlule
Ukusebenza kukaBitcoin kwaqhubeka nokuheha izincomo.
Ama-spinoffs we-Bitcoin nawo azuzile ekuzuzeni kwesikhwama semakethe ye-BTC.
Izimakethe zamasheya zinethemba lokuthi imibiko yokuhola kuleli sonto izobanika okuthile abangakujabulela.
Ngempelasonto, okuvelele kuqhubekile nokungena Bitcoinukusebenza. Owahola leli cala kwakunguMichael Saylor, isikhulu esiphezulu seMicroStr Strategy esanda kudonsa imali engamaRandi ayizigidi ezingama-425 ku-Bitcoin.
Ku-an interview ngomthombo wezindaba zezezimali iReal Vision, umphathi wezigidigidi wenkampani yezobunhloli ebhizinisini naye wathi uma utshala imali Bitcoin, umuntu uhlala ekhathazekile ukuthi abatshali imali eyanele.
“Uma lingadlulwa ngokuphindwe kayikhulu kunegolide, liphindwe kasigidi kunegolide futhi akukho okuseduze kwalo,” kusho uSaylor. Lapha ku-Market Report sithanda ukucabanga ukuthi i-Bitcoin ifana kakhulu nokuhlawuliswa iwayini, iwhisky namawashi, kodwa abantu banelungelo lokuthola imibono yabo.
Vala ngemuva esitimeleni sokudumisa kwaba Kanye West, owavela ku-podcast kaJoe Rogan etshela ababukeli ukuthi i-Bitcoiners "inombono wokuthi inkululeko yaseMelika neyabantu bayoba yini.":
Intengo yeBitcoin ngempelasonto ibibambelele, yehla nje ngo-0.06% emahoreni angama-24 edlule.
Kepha indaba kaCinderella yama-cryptocurrensets emasontweni ambalwa edlule kube yizingane zeBitcoin: amaphrojekthi aphume kunina wawo wonke ama-cryptos. Siyakhuluma Litecoin, I-Bitcoin i-SV futhi I-Bitcoin Cash.
Ngenyanga edlule, iLitecoin inyuke ngama-25%, iBitcoin Cash 21% neBitcoin SV inyuke icishe ibe ngu-10% nayo. Kepha ngenkathi lawa maphrojekthi ekhushulwe emazingeni ezimakethe, akunakushiwo okufanayo kumaphrojekthi weDeFi.
Amavolumu asezingeni elisuselwa e-Ethereum ukuhwebelana uwe eweni kule nyanga. Ivolumu yokuhweba yehle ngama-41% ezinsukwini ezingama-30 ezedlule, ngokusho kwedatha evela kudeshibhodi kusayithi le-metric iDune Analytics.
Ukuhweba kwamasonto onke ku ehloniphekile Ukuhwebelana kufinyelele ku- $ 8 billion nje ngo-Agasti 31, ngaphambi kokuba umsebenzi uqale ukuphola. Amanani okuhweba amasonto onke asehle abe ngaphansi kwamadola ayizigidi eziyizinkulungwane ezintathu, kusukela ngo-Okthoba 3, idatha yakamuva kakhulu yesikhulumi seDune Analytics enedatha yayo. Lokho kwehla okungaphezu kwama-12% kusukela kuleso sikhathi esiphakeme sasehlobo.
“Ukuhwebelana okwabelwe phansi kwakuyizindlela zokungena emakethe yakwaDeFi. Manje njengoba isivuno esilahlekile sesinyamalele, izimakethe sezilungisa zaze zafinyelela ezingeni eliphansi lomsebenzi, ”kusho okhulumela le nhlangano I-AAX, ukushintshaniswa kwempahla yokuqala yedijithali emhlabeni enikwe amandla yiLondon Stock Exchange.
Izimakethe Zokuphahlazeka ze-COVID
Ngale ezimakethe ze-fiat, abahwebi babe nempelasonto esabekayo. Ngesikhathi sokubhala, i-S & P, Dow, Nasdaq, Crude Oil ngisho neGold konke bekuphansi njengoba amacala weCoronavirus ephula amarekhodi amasha omhlaba.
EWhite House, amalungu amaningana abasebenzi bephini likamongameli uMike Pence ahlole ukuthi analo leli gciwane, njengoba amacala aqinisekisiwe emhlabeni adlula isibalo esingu-42 million futhi isibalo sokufa okuqinisekisiwe saya enyakatho kwesigidi.
Amathemba ephasela lokuvuselela umkhumbi abukeka eshabalala, kepha abathengisi banethemba lokuthi inqwaba yemibiko yokuhola izobanika okuthile abangathokoza ngakho.
I-Apple, i-Amazon, iMicrosoft, i-Facebook, i-Google, i-AMD ne-Shopify ziphakathi kwamakhulu ezinkampani ngenxa yokukhipha imibiko kuleli sonto. Lezi zinkampani zobuchwepheshe zonke zibone ukuzuza okuphawulekayo ngesikhathi se-COVID, ngakho-ke abathengisi banethemba lezinto ezinkulu ngesonto elizayo.
Ukuxhaswa ngu I-AAX
Lo mbhalo oxhasiwe wenziwe yiDecrypt Studio. Funda kabanzi mayelana nokusebenzisana ne-Decrypt Studio.
Ukuthola ukuqonda okujulile ngokuthi abatshalizimali abangochwepheshe bazizwa kanjani ngezimpahla zedijithali, iCointelegraph Consulting ishicilele umbiko wocwaningo lwamakhasi angama-70 + obhalwe ngababhali abayisishiyagalombili futhi osekelwa yi-SIX Digital Exchange, iBlockFi, iBitmain, iBlocksize Capital, neNexo. I- Ukuthola Isidingo Sezikhungo Sezimpahla Zedijithali Umbiko ubalula ukuthi yiziphi izinhlamvu zemali abatshalizimali abacebile asebenazo nokuthi yiziphi abahlela ukuzithenga ezinyangeni ezizayo. Umbiko ubuye uhlanganise nezimali ezilawulwa kakhulu ezithandwayo nemikhiqizo ehlelekile eyenzelwe abatshalizimali abavela emkhakheni wezezimali wendabuko.
Ingqikithi yezimpahla ezingaphansi kokuphathwa kwabanikezeli bephothifoliyo abangama-55 ababambe iqhaza ocwaningweni ibingaphezu kwama- € 719 billion, okucishe kuphindwe kabili kulo lonke imali yemakethe yemakethe yempahla edijithali. Kulabo batshalomali abangochwepheshe, ama-36% asevele enezimpahla eziphefumulelwe nge-blockchain kwiphothifoliyo yabo noma ngokutshala imali ngqo kuma-cryptocurrensets, ama-solidcoins, namathokheni okuphepha noma ngezimali, imikhiqizo ehleliwe, noma ikusasa.
Kuma-64% asele angakatshali imali, ama-39.29% ahlela ukutshala imali. Lokhu kuholela ku-36% + 25.15% = 61.15% wabatshalizimali abangochwepheshe ocwaningweni okungenzeka ukuthi sebenempahla yedijithali noma behlela ukuthenga ngokuzayo.
Landa umbiko ogcwele lapha, ephelele ngamashadi ne-infographics.
Iningi labatshalizimali abachayeka ezimpahleni ze-cryptographic babenesithakazelo esikhulu ku-Bitcoin (BTC) no-Ethereum (I-ETH). Cishe i-88% ne-75% yabaphenduli abadalulwe kuma-cryptocurrensets batshale imali kulezi zidijithali, ngokulandelana. Kodwa-ke, abatshalizimali bezikhungo babonakala bethanda kakhulu amathokheni okuphepha. Ku-39.29% wabatshalizimali abahlela ukutshala imali ngokuzayo, amathokheni okuphepha ayethandwa kakhulu kune-Ethereum nezinye izinhlamvu zemali ezihlukile.
Abanye abatshalizimali babamba izimpahla ze-cryptographic zokuqagela kunokuba bazisebenzise njengendlela yokushintshanisa. Banethemba lokuthi "bazogijimela phambili" iWall Street ngokuthenga ngaphambi kokuba amaphakethe amakhulu angene emakethe. Ukubeka ukwesaba ukuphuthelwa eceleni, kunezizathu zangempela zokujabula ngabatshalizimali bezikhungo abajoyina lesi sikhala.
Usayizi omkhulu womcebo ophethwe ngabatshalizimali abangochwepheshe njengezimali zempesheni, izibonelelo zenyuvesi, nezinkampani zomshuwalense zanele ukuba nomthelela omkhulu kuyo yonke imboni yezimpahla zedijithali uma zingena emakethe. Sekuyiminyaka, kube namahlebezi okuthi abatshalizimali bezikhungo baqala ukuthenga ama-cryptocurrensets, futhi manje, ucwaningo lwakamuva kakhulu lwezifundo, kanye nezindaba zeMicrostrategy, iStone Ridge ne-Square engena kwi-crypto, zinikeza ubufakazi bokusekela lokhu.
Ucwaningo lwenziwa ngoJuni kuya kuSepthemba 2020 nguProfesa uDkt. Philipp Sandner waseFrankfurt School of Finance & Management's Blockchain Centre, uSolwazi uDkt. Alfred Taudes waseVienna University of Economics and Business 'Austrian Blockchain Center, kanye nomqondisi wezocwaningo waseCointelegraph, UDemelza Hays. Umbiko ushicilelwe ngokubambisana ngu- Ukubonisana kweCointelegraph futhi Umbiko Wokucwaninga we-Crypto.
ICointelegraph Consulting inikeza ucwaningo lwe-bespoke kumafa edijithali kanye nobuchwepheshe beleja obuhanjisiwe. Izinsizakalo zethu zisukela kumasemina wezemfundo, imibiko ebhaliwe ejulile nokubonisana ngamasu wokuqalisa we-blockchain webhizinisi. Umbiko we-Crypto Research ukhipha imibiko yamahhala yama-quarterly ngesiJalimane nesiNgisi kanye nocwaningo lwe-premium lokuthenga ohulumeni, amabhange, namahhovisi emindeni ezihlokweni zobuchwepheshe bezincwadi ezisatshalaliswayo kanye nokuphathwa kwempahla kwama-cryptocurrensets.
IHhovisi lePeople's Bank of China (PBoC) eHuizhou City kumemezela NgoLwesine, ngo-Okthoba 23, kuvalwe izindawo ezintathu zokugembula kwathi kwaboshwa abantu abangu-77 mayelana nezinsolo zokukhwabanisa imali.
Lezi zinsolo zibandakanya abasolwa abasizakala ngeTether USDT, imali eyi-cryptocurrency ekhonjwe kwiDola laseMelika, emizameni yabo "yokugaya" noma yokufihla umlando wezimali okukhulunywa ngazo, ezilinganiselwa ku-120 million Yuan noma cishe amaRandi ayizigidi eziyi-18.
Muva nje i-Tether namanye ama-solidcoins ajabulele ukwanda kokuthandwa. Banikezela ngezindlela zenani elizinzile ngaphakathi kwemakethe ye-idijithali yemali futhi babamba okuhle, ngombono, kokunye ukusetshenziswa okufana nezinkokhelo. Kodwa-ke, ama-case-in-point, ama-solidcoins asengakwazi ukusetshenziswa kabi futhi aqhubeke nokudonsa ukukhathazeka kwabalawuli. Ngenkathi ukwamukelwa okubanzi ngamabhizinisi kuyisinyathelo esilandelayo esibalulekile kuTether, izinhlangano zihlala zinganqikazi ngenxa yezinselelo zomthetho nezokulawula ezingabhekana nazo ngokwenza njalo.
Ukuphoqelelwa okuningi kwemithetho ye-KYC ne-AML ku-cryptocurrency namuhla kwenzeka ngaphakathi kwezinhlelo zokusebenza nezinsizakalo, hhayi kuma-blockchains. Lokhu kusho ukuthi abalingisi ababi bangabalekela imithetho ngokumane bakhethe uhlelo lokusebenza noma insiza ehlukile. Lokhu kubeka engcupheni amabhizinisi angathanda ukwamukela iTether, nakuTether uqobo njengoba ohulumeni beqinisa ukuphoqelelwa.
Isixazululo ukuphoqelela ukuhambisana ku-blockchain. Imizamo eminingi yalokhu isebenzise amanethiwekhi aphakathi nendawo noma azimele - ama-blockchains wokuhlola amaningi lapho ukuphepha kungavunyelwa khona umkhakha cishe njengeBitcoin. Amabhizinisi abucayi ajwayele ukugwema ukwamukela lokhu ngenxa yobungozi besikweletu kanye namandla okuba amanye amaqembu angalithembi ileja. Ngakolunye uhlangothi, imizamo yakamuva yamabhulokhi we-decentralized inikeze ukugcinwa okulinganiselwe kanye nensizakalo engezansi engakwazi ukukhuphukela ekufuneni.
Izindaba ezinhle: izixazululo seziqala ukuvela. Isibonelo esihle sibonakala entuthukweni yakamuva yokuthobela iSyscoin, inkundla yamathokheni esesidlangalaleni eyenzelwe ikakhulukazi ukukala izinkokhelo kwezidingo zomhlaba wonke. I-Syscoin, engenamvume futhi engacindezeli ngokuzenzakalela, izonikeza iTether namanye amathokheni amandla okuthi "angene" ekuthobeleni inethiwekhi ekhubazekayo. Lapho iTether ivula lokhu, inethiwekhi ye-blockchain kaSyscoin izoqinisekisa ukuthi konke ukuthengiselana kwe-USDT kuhlangabezana nezidingo ngaphambi kokuthi kubhalwe phansi (noma kusayinwe, nge-blockchain parlance) futhi kuxazululwe.
Imithetho yokuthobela iSyscoin ingasebenzisa imininingwane yobunikazi, umlando wokuthengiselana, kanye nemininingwane yolwazi engaphandle kwamaketanga ukubheka ukuba semthethweni kokuthengiselana okulindile. Ngaphezu kwalokho, uTether uzokwazi ukusebenzisa imithetho ethile ngokuya ngezwe noma indawo yezomnotho, futhi ayivuselele ukuze ihambisane nemithetho eguqukayo. Lezi “Imithetho Yokuthotyelwa Kwenethiwekhi” kulindeleke ukuthi zenze kube lula ezinhlanganweni ukwamukela ama-solidcoins kanye ne-blockchain tech. Ithimba lokuthuthukiswa kweSyscoin lihlela ukuletha lokhu ngeSyscoin Core version 4.2 okulindeleke ukuthi ibe yi-Q1 2021.
Ukulandela umkhondo wezibuyekezo ze-DeFi ngesikhathi sangempela, hlola okuphakelayo kwethu kwezindaba ze-DeFi Lapha.
Umbhali: Achal Arya
Ngingusomabhizinisi futhi ngingumbhali oneziqu ze-bachelors kuComputer Science. Ngiphatha ubuchwepheshe be-blockchain kanye nezembozo ze-crypto eCoingape. ngilandele ku-Twitter ku @sbahle_mpisane noma ufinyelele kimi ku-achal [ku-] coingape.com.